भाईरल ज्वरो के हो ? कसरि बच्ने , कस्तो लक्षणहरु देखिन्छ्न? – Public Health Concern(PHC)
भाईरल ज्वरो के हो ? कसरि बच्ने , कस्तो लक्षणहरु देखिन्छ्न?
in Uncategorized, बिरामी हेरचाहा, मेरो स्वास्थ्य : मेरो सरोकार
भाइरल ज्वरो सरुवा रोग हो । रोगीले खोक्दा, हाँच्छ्यु गर्दा, हाई काढ्दा उसको शरीरमा भएका भाईरस सजिलै अर्को व्यक्तिमा सर्ने गर्छ । रोगीको नजिक बस्दा स्वस्थ मानिसको नाक, मुखबाट यस्ता भाइरस सर्ने गर्छ ।
एक्कासी ज्वरो बढ्नु ।
छिनमा चिसो छिनमा तातो महसुस हुनु ।
हल्का खोकी लाग्नु ।
शरीर दुख्नु, जोर्नी दुख्नु ।
वाकवाकी लाग्नु, कम्जोर महसुस हुनु ।अनुहार सुन्निनु र छाला रातो भई फोका आउनु ।
आँखा रातो हुनु ।
जथाभावी एन्टिबायोटिक प्रयोग गर्नु हुँदैन ।औषधिको डोज पूरा गर्नुपर्छ । बीचमै औषधि खान छोडिदिनु भयो भने एन्टिबायोटिक प्रतिरोधी ब्याक्टेरिया उत्पन्न हुन सक्छ ।ज्वरोलाई कहिल्यै पनि हेलचेक्राईं गर्नु हुँदैन ।तत्काल अस्पताल जान सकिएन भने घरमा नै सामान्य उपचार गर्नु पर्छ ।
रोगबाट बच्ने उपाय :
व्यक्तिगत सरसफाईको बारेमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।
साबुन पानीले नियमित रुपमा दैनिक तीन चार पटक हात धुनुपर्छ ।भीडभाडमा जानु हुँदैन ।श्रोत
Tags: better to know in healthhealth infoJanaswaasthya SarokarViral Fever
बिरामी फरक ढङ्गले हेरौं : डा समीर लामा !
स्वास्थ्य समायोजनको समसामयिक बिषयमा यसो भन्छन मन्त्रालयका प्रबक्ता महेन्द्र श्रेष्ठ !